Wafti ka socday dawlada federaalka ah oo tababar u joogay Puntland oo ka dhoofay madaarka Garowe. – Radio Daljir
Wafti ka socday dawlada federaalka ah oo tababar u joogay Puntland oo ka dhoofay madaarka Garowe.
Luulyo 3, 2010 12:00 b 0
Garowe, July 02 – Wafti ka koobnaa 4 xubnood oo ka socday dawlada federaalka ah ee Somaliya oo tababar ku saabsan iskaashiga hantiga guud & tan gaarka ah ama ‘public, private partnership’ uu ugu soo xirmay Garowe ayaa ka xog waramay la-kulamadoodii mudadii ay ku sugnaayeen Puntland. Xubnaha waftiga ayaa amaanay amniga iyo nidaamka Puntland oo sida ay sheegeen ay aad uga heleen, kana mahadceliyey sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyey.
Ururka Ardayda Puntland ee Malaysia oo doortay hoggaan cusub, kulan ay ku yeeshay Plaza Hall.
Tartanka Dhalinyarada ee Koobka Kubadda Cagta ee Nabadda.